Yan Aung: အလင်းတန်း
လေအေးလေးတစ်ချက်က ကိုယ့်နဖူးကို လာပြီးတိုးဝှေ့တာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဖြတ်ခနဲ လန့်နိုးသွားတယ်။ ညကတံခါးပိတ်အိပ်ထားပါတယ်ပေါ့။ အပေါ်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှ ပြတင်းပေါက်တစ်ချပ်ကို လေတိုးလို့ ပွင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဩော်. အခန်းထဲမှာလည်း ဘယ်သူမှ မရှိကြတော့ပါလား…
နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၁၀ နာရီထိုးနေပြီပဲ။ ခါတိုင်းဆို ဒီအချိန် အလုပ်ကိုသွားနေပြီ။ ဒီနေ့တော့ နားရက်မို့လို့ အိပ်ယာထဲမှာ ခဏ ခွေနေလိုက်တယ်။ မြေအောက်ခန်းထဲကို အလင်းရောင်လေးတွေ ကွက်တိကွက်ကျားဝင်နေတာကို ခံစားချက်မပါတဲ့ မျက်လုံး၊ ဟာနေတဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ လိုက်ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
မနေ့ညက Online မှာခဏနေတုန်း အစ်မ Email လာပို့တယ်။ စကားပြောလို့ရလားလို့ မေးတာနဲ့ ရတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်နေတော့ အမေနဲ့အစ်မ Gtalk ထဲကို ၀င်လာခဲ့တယ်။ ပုံမှန်ကတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ စနေနေ့ညဆိုရင် စကားပြောဖြစ်ပါတယ်လေ. ခုတလော အလုပ်နည်းနည်းများနေတာရယ်၊ စာမေးပွဲခံသွားတာရယ်ကြောင့် ၂ ပတ်လောက် စကားမပြောဖြစ်လိုက်ဘူး…
ညကအမေနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ စကားတစ်ချို့နဲ့ အလုပ်ကိစ္စလာတိုင်ပင်တဲ့ အစ်မအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို နိုးနိုးချင်း စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ ဖုန်းကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း မခေါ်ထားပါလား။ မအား လို့ပဲနေမှာပါလေလို့ ပြန်နှစ်သိမ့်ရင်း စောင်ကို တင်းတင်းပြန်ခြုံလိုက်တယ်။ မျက်စိကို ပြန်မှိတ်လိုက်တယ်။
မနေ့က တစ်နေ့လုံးချောင်းဆိုးပြီး အအေးမိသလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အလုပ်ကတော့ သွားရတာပေါ့လေ။ စနေနေ့ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်က လူပိုကျတတ်တာကိုး။ အလုပ်မှာ တစ်ခါတစ်လေ မိုက်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ ခရီးဆက်တိုက်ထွက်တာရယ်၊ စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ချို့တွေရဲ့ ကျိန်စာအောက်မှာ ရောက်နေခဲ့တာရယ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဏ လျစ်လျူရှုမိသွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မနေ့ညကအိမ်နဲ့ စကားမပြောတော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတာပါ။ ခုတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လည်း တွေ့ရ၊ စကားလည်း ပြောချင်၊ မနက်ဖြန်လည်း အားရက်ဆိုတော့ အမေလာမယ်ဆိုတာကို ၀မ်းသာအားရပဲ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်.
ကျောင်းစရိတ်အတွက် ပိုက်ဆံကို ကြိုးစားစုနေရတဲ့ တစ်ယောက်တည်းသမား အတွက် အရာရာဟာ အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွက်ပြီးသားပါလေ။ တစ်စုံတစ်ရာကို မှားယွင်းဆုံးဖြတ်မိတာနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသာ မကဘဲ မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးတဲ့ တစ်နေရာက မိသားစုဝင်တွေရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါ ဖျက်ဆီးလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် မှားမှာကြောက်လုိ့ ဘာမှစွန့်စွန့်စားစား မလုပ်ရဲဘဲ လုံလုံခြုံခြုံ စီစဉ်တွက်ချက်တတ်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမျိုးကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ တစ်ခါမှ မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး။ စွန့်စားမှုကိုလည်း မလျှော့သေးပါဘူး။ ခုလည်း စွန့်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပြန်ပြီလေ။ အောင်မြင်မှုရဲ့အရသာ ဆိုတာ ကလည်း စွန့်စားပြီးရမှ ပိုပြီး မြိန်ရည်ရှက်ရည်ရှိတာ မဟုတ်လား။
အထင်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အမေ့ရဲ့ မေးခွန်းကို ချက်ချင်းပြန်မဖြေလိုက်နိုင်သေးဘူး။ ဆက်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို အခက်အခဲသိပ်မရှိတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ အကြမ်းဖျင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သိပ်ခက်နေတာကို အမေသိသွားရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ်လေ။ စကားပြောနေတုန်း ချောင်းမဆိုးမိအောင် သတိထားနေကာမှ ဆိုးမိသွားတယ်။ ထိန်းထားတဲ့ ကြားက ချေမိသွားတယ်။ မိုက်ကို လက်နဲ့အုပ်လိုက်ပေမယ့် မရတော့ဘူး။ တစ်ဖက်ကကြားသွားတယ်…
“နေမကောင်းဘူးလား သားရယ်” တဲ့
ချက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို မတ်မတ်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ အသံကို ကြည်လင်အောင် ချောင်းတစ်ချက် နှစ်ချက်ဟန့်လိုက်ရင်း ပြန်ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ ရေပြောင်းမြေပြောင်း မို့ပါ အမေရယ်လို့ပေါ့. တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်လို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ဇွတ်ငြင်းတာထက် အဖြစ်မှန်ကို ပေါ့သွားအောင် ပြောလိုက်တာက ပိုပြီးတော့ မှန်ကန်ထ်ိရောက်တယ်လေ…
စကားပြောနေရင်းကနေ အမေ့အသံမှာ ရှိုက်သလိုလို ငိုသလိုလို အသံကို မနည်းကြီးထိန်းပြီး ပြောနေရတဲ့ အသံလို ဖြစ်လာတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ မင်းအစ်မနဲ့ ပြောလိုက်ဦးတဲ့ ဆိုပြီး မိုက်ခရိုဖုန်းကို လွှဲပေးလိုက်တယ်.
ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်ထဲက စူးခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားတာကို ထင်ထင်ရှားရှား ခံစားလိုက်ရတယ်…
ကိုယ့်အသံကို မတုန်အောင် ပြန်ထိန်းရင်း ခြောက်ကပ်ကပ်ရီသံတစ်ချို့နဲ့ ဟာသတစ်ချို့ကို ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်. အမေ့ဆီက ချောင်းဆိုးတဲ့ရီသံကို ပြန်ကြားလိုက်ရပြီး ကိုယ့်ရီသံကလည်း ချောင်းတွေဆိုးသလို ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်…
ကျွန်တော်အများကြီးစွန့်စားရဦးမှာပါ အမေရယ် လို့ ရင်ထဲမှာ တိုးတိုးလေး ပြောနေခဲ့လိုက်တယ်….
အဲလိုပြောနေခဲ့ရင်းက ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ အမေ့အကြောင်းကို ဆက်တွေးမိ သွားခဲ့တယ်ဗျာ…
အဖေကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာ ၁၅ နှစ်တောင်ရှိတော့မယ်. အဲဒီ့တုန်းက လူမမည်စာမမြောက်သေးတဲ့ မောင်နှမလေးယောက်ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် အမေတော်တော်ရင်ပူခံစားခဲ့ရမှာပဲနော်.
ကျွန်တော်အမေ့ကို ခုချိန်ထိ အထင်ကြီးလေးစားနေတာ တစ်ခုရှိနေတယ်. မှတ်မှတ်ရရကို အထင်ကြီးနေခဲ့တဲ့ အရာပေါ့
အဖေအသက်ငင်နေချိန်မှာ အဖေ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကို ကြေးစည်ထုခိုင်းပြီး အဖေ့ရဲ့ နားနားမှာ တိုးတိုးလေးတတွတ်တွတ် ကပ်ပြောနေခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုပေါ့…
ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့နော်. ကလေးတွေလည်း ရှင်ပြုပြီးပြီ. ရွာမှာလည်း အလှူတွေလုပ်ပြီးပြီ. ကလေးတွေလည်း ပညာတတ်နေပြီ။ ကုသိုလ်တွေလည်း အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အားလုံးကို စိတ်ချပါ။ ဘာမှ စိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့။ သွားလိုရာကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သွားပါနော်.”
ဒီစာသားတွေကို အခေါက်ပေါင်းများစွာ မတူညီတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးပြီး အဖေ့နားထဲကို တတွတ်တွတ်အမေပြောနေခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် အမေ့နောက်က ပြတင်းပေါက်နားမှာ ရပ်နေခဲ့တယ်။
လက်တစ်ဖက်က မာလကာပင်ကိုင်းကြီးတိုးဝင်နေတဲ့ ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကို တင်းတင်းဆုပ်လို့…
နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေတဲ့ ရင်အစုံကို ထိန်းချုပ်လို့…
အဖေလဲလျောင်းနေတဲ့ ခုတင်ဘက်က တံခါးတစ်ချပ်ကိုပိတ်ထားတယ်. ဖွင့်ထားတဲ့တံခါးရဲ့ တစ်ဖက်မှာ လူတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့. လမ်းတစ်ဖက်က ဈေးကြီးထဲက လူတစ်ချို့ ကြေးစည်သံတစ်ချက်ထွက်တိုင်း လှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တစ်စက်ကို ဆတ်ခနဲ ခါထုတ်လိုက်ရင်း ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကို ခဏမျက်နှာလွှဲနေလိုက်တယ်။
အဖေကျွန်တော်တို့ကို ထားခဲ့ပြီး သွားတော့မယ်ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ…
၁၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာ နောက်ဆုံးကြေးစည်သံတစ်ချက်ထွက်လာတယ်…
အဖေ့ရဲ့ ထွက်သက်ကို အမေညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ လှမ်းစမ်းနေတာ တွေ့ရတယ်.
အဖေ့ကို တအားဖက်လိုက်ပြီး အဖေ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ အမေထိန်းထားခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေကို သွန်ချပစ်လိုက်တယ်….
ကျွန်တော်နဲ့အစ်ကိုလည်း မျက်နှာတွေရဲနေတာပဲ အမေရယ်.
အစ်မကြီးက ကျောင်းမပြီးသေးဘူး. နောက်ဆုံးနှစ်….
သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ဒီနေ့ လေယာဉ်နဲ့ရောက်မယ်…
ခုအမေရယ်၊ အစ်ကိုရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်ပဲ အဖေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို မီလိုက်ကြတယ်နော်…
မနက်က လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင် အစ်မကြီးက ဖုန်းဆက်တယ်. ကျွန်တော့်ကို အမေက သွားပြောခိုင်းတယ်နော်. အမေက ကျွန်တော့်ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ယုံကြည်အားကိုးခဲ့တာကို ကျွန်တော်မမေ့ဘူးသိလား အမေ…
အခြေအနေတွေကို ကောင်းပါတယ်လို့ ငါ့သားကြည့်ပြောလိုက်ပါတဲ့…
ရပါတယ် အမေရယ်. သားနားလည်ပါတယ်….
အစ်မကြီးကို ကြိုတဲ့ကား အိမ်ရှေ့က အဖြတ်မှာ လူတွေအုံနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကို ကားခေါင်းခန်းထဲက လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို သနားလိုက်တာဗျာ….
ကားက အိမ်ဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့ ပြေးလာတဲ့ အစ်မကြီးမှာ ဖိနပ်တောင် မပါဘူးအမေ…
သားအမိနှစ်ယောက်တွေ့တော့ ဖက်ပြီးငိုကြတာတွေ၊ ကျွန်တော်မျက်နှာလွှဲထား ခဲ့ပေမယ့် သိနေမြင်နေခဲ့တယ်…
အစ်ကိုကြီးက ၁၀ တန်းဖြေရတော့မယ်…
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာမေးပွဲက ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ…
အစ်မကြီးက ကျောင်းမပြီးသေးတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူ..
အစ်မငယ်က အလုပ်ကို မျှော်လင့်နေဆဲ သင်တန်းသူ…
လက်ထဲမှာ အဖေထားသွားခဲ့တဲ့ ငွေရင်းငွေနှီးဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ…
ကျွန်တော်အမေ့ကိုယ်စား စိတ်ပူနေခဲ့မိတယ် အမေရယ်…
ငယ်လွန်းလို့ မစဉ်းစားတတ်သေးဘူး မထင်ပါနဲ့နော်. ကျွန်တော့်ရဲ့ အရွယ်ရောက်မှုက စောပါတယ်. ဒါကို အမေနောက်ကျမှ တဖြည်းဖြည်း သိလာခဲ့ရတာ မဟုတ်လား…
အားလုံးက စာမေးပွဲပြီးမှ နေရာသစ်ကို ပြောင်းဖို့ တားကြပေမယ့် အမေရဲဝံ့စွာပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်. အဖေရက်လည်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ကို သဘောင်္ကြီးစီးပြီး လာခဲ့တယ်နော်. သဘောင်္ပေါ်က အခန်းငယ်လေးထဲမှာ အမေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်များများမှာ နေပေးခဲ့တယ် သိရဲ့လားအမေ..
ကျွန်တော်တို့ကို လိုက်နှုတ်ဆက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို သင်္ဘောပေါ်က လက်ပြရင်း ကျွန်တော်တစ်ခု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ဖူးတယ် အမေ…
ဒီနေရာကို တစ်နေ့ပြန်လာပြီး အဖေလဲလျောင်းခဲ့တဲ့ နေရာလေးမှာ အမှတ်တရ တစ်ခုခုလုပ်ပေးမယ် လို့ပေါ…
နေရာစုံမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျင်လည်ခဲ့ရတယ်နော်…
အမေ့ဆီက ပိုက်ဆံကို မတောင်းဘဲ ကျူရှင်တွေဆိုတာကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချခဲ့ပြီး ဘာမှမရှိတဲ့ ကျွန်တော် အောင်ပွဲတွေ အလီလီဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ် အမေ…
လူရာမသွင်းချင်တဲ့ ဆွေမျိုးတစ်ချို့ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အငြင်းပွားစရာ မရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ချို့နဲ့ လက်စားချေခဲ့တာ အမေသိပါတယ်…
နှိမ့်ချသလို အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့ လူတစ်ချို့ကိုလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ပညာအစွမ်းနဲ့ပဲ ပြန်လည်တုံ့ပြန်သိမြင်စေခဲ့ပါတယ်.
ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်လုဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း တိုင်းရေးပြည်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့် အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရင်နာနာနဲ့ လက်လွှတ်လိုက်ခဲ့ရတယ်.
ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ကို အလှမ်းဝေးကွာလွန်းလှတယ်လို့ အားလုံးက ပြောနေတဲ့အောင်မြင်မှုကို ကျွန်တော် ထိုက်တန်စွာရခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ အမေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပါ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကို ကျွန်တော် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်… အမေကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်နေခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား...
ကျွန်တော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မယုံကြည်နိုင်သူတွေ အများကြီးရှိလေလေ ကျွန်တော်အမေ့အတွက် ဂုဏ်ယူလေလေပါပဲ.
အမေ့ကို ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တယ် အမေ…
အမေကျွန်တော်တို့ မိသားစုလေး မပြိုကွဲအောင် ကြိုးစားစီမံခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်မမေ့သေးဘူး..
အမေဦးမဆောင်နိုင်ပေမယ့် အမေ့ရဲ့ မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့ မိသားစုကို အေးမြနွေးထွေးစေခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော်အမေ့ကို ကျေးဇူးဆပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်ကျေးဇူးတွေ စဆပ်နေတာ ကြာပါပြီ..
ဒီ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်ကျေနပ်အားရပါတယ်. ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်..
နောက်ထပ်ကြုံဆုံလာရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်လည်း အားအင်အသစ်တွေ ရရှိမိပါတယ် အမေရယ်…
ကျွန်တော်က အမေမကြိုက်တာတွေ မလုပ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးမယ့်သားလိမ္မာ အမျိုးအစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. အမေ့အတွက်ကောင်းမယ်ထင်ရင် အမေမကြိုက်တာတောင် လုပ်မယ့်သားပါ.
အမေမသိမြင်နားမလည်နိုင်ခဲ့တာ တစ်ချို့ကို ကျွန်တော်ကြိုးစားရှင်းပြ ပေးသွားမှာပါ.
ကျင်လည်ရှင်သန်နေခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေ မတူတဲ့အတွက် အမေနဲ့ ကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိမှာပါ..
အမေမကြိုက်တာကို လုပ်မိတယ်လို့ အမေဆက်ထင်နေသေးခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး အမေရယ်…
အမေ့အတွက် ကျွန်တော်က အလင်းတန်းတစ်ခု ဖြစ်ချင်တာပါ အမေရယ်….
အမေနဲ့ ကျွန်တော်နောက်နောင် ဘ၀များမှာ မဆုံတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်ဒီဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ချို့ အမေ့ရဲ့ သံသရာ ခရီးအတွက် ထည့်ပေးလိုက်မှာပါ…
အမေနဲ့ ကျွန်တော်တစ်နေ့နေ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်….
ရင်အစုံမှာ ဘယ်သူမှရိုက်ချိုးလို့မရတဲ့ ဇွဲမာန်တွေအပြည့်ရှိနေဆဲပါ…
အမေနဲ့ပြန်တွေ့ဖြစ်တဲ့တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ချို့အကြောင်း ပြောပြမယ်နော်…
မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ရဲ့အားမာန်နဲ့ ဘ၀ခရီးကို အမှားအယွင်းမရှိအောင် ဆက်လက်ခရီးဆက်သွားမှာပါ…
လေယာဉ်ကွင်းမှာ အမေပေးခဲ့တဲ့ အနမ်းတစ်ချက်က ခုချိန်ထိရှင်သန် လတ်ဆတ်နေဆဲပါ အမေ…
အမေများနေ့မှာ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ အမေတစ်ယောက် ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင် စရာလေးတွေ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါစေ…
အဖေမရှိတော့တဲ့ ကျမလဲ ဝေမျှခံစားရပါတယ်..
ဒီလိုပါဘဲ..လောကမှာ အားလုံး ခဏလေးနေကြရတာပါ..
ရှင်သန်နေတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ..အဖေနဲ့သား၊ အမေနဲ့သမီး၊ လင်နဲ့မယား၊ အကိုနဲ့ညီ၊ အမနဲ့ညီမ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆရာနဲ့တပည့် အဖြစ်တွေနဲ့ တိုတောင်းလွန်းစွာ ခဏတာဆုံဆည်းကြရတာပါ…
မနေ့က ကိုရန်လေးဘလော့ ၀င်မရလို့ ခုမှပဲ ဖတ်ရတော့တယ်။
ဒီစာကို ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အမေတွေနဲ့ အဝေးမှာ နေနေရတဲ့သားတွေရဲ့ ဘ၀ကို စာနာမိပါတယ်။
အဝေးမှာနေပေမဲ့ အမေ့ကို စိတ်ထဲ အမြဲရှိနေတာဟာ လိမ္မာတဲ့ သားပဲ။
အမေတိုင်းဟာ အလင်းတန်းပမာ သားသမီးတွေပေါ်မှာ ညီမျှစွာ ဖြာကျနေမှာပါ။
အမေ့အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ ကိုရန်လေး ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပါစေလို့ မမေလည်း ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
မောင်ရန်... ခုန ကွန်မန့်တင်တာ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ပြန်ထပ်တင်ရတယ် ။ မလေးလိုပဲ တို့လည်း ဒီပို့်စ်လေးဖတ်ရင်း ၀ဲလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ် ။ မိဘကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့တွက် မင်းဘ၀မှာ နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုတွေ ရလာဦးမှာပါ ။
မင်းနောက်မှာ တို့တတွေအားလုံး ရှိနေမယ် .. မင်းအတွက် ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ အားမာန်တွေ ပြည့်စေဖို့တွက်... ။
Once I've already read your this post, I got copied your feelings and I cannot find out any words to say and to express some. (heart hti tel)
Wish you may be big tree which 10,000 birds can depend and rest on it!
ဦးရန်ရေ ညလေးလဲ ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲလာတယ်ဗျာ။ ဦးဦးရန်တယောက် အောင်မြင်မှုတွေ တသီကြီးပိုက်ပြီး အမေ့ဆီကို အမြန်ပြန်နိုင်ပါစေဗျာ။
ဘာပြောရမှန်း မသိနိုင်လောက်အောင် ထိရှပါတယ်။
အားပေးဖတ်ရှုသွားကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများရဲ့ အားပေးစကားတွေအတွက် ပြောမပြတတ်အောင် နွေးထွေးလုံခြုံမှုတစ်ခုကို ရရှိခံစားရပါတယ် ခင်ဗျာ...